प्राचीन सिक्का: पोर्चुगिज, अमेरिकी, ब्राजिलियन, सोभियत। पुरातन सिक्का आज कति छन्?
Numismatics - मात्र रूस मा धेरै मान्छे को मनपर्ने सोख को एक, तर पनि युरोपेली देशहरूमा। तर, केही सङ्कलन लागि साना सिक्का विगत देखि आय एक प्रकारको हुन्छ। पुरानो सिक्का कति छन्? यो प्रश्न धेरै सुरु संग्रहकर्ता haunts। यो सबै पैसा, आफ्नो नाममात्र मूल्य र अन्य कारक को राज्य मा निर्भर गर्दछ देखि यहाँ unequivocal जवाफ, हुन सक्दैन।
सबैभन्दा महंगा विश्व सिक्का को दर्जा
"पुरानो सिक्का कति छन्?" - तपाईं सोध्नु। केही - हजार, र अरूलाई - सम्पूर्ण राज्य, जो डलर को लाखौं मा अनुमानित गर्न सकिन्छ। प्राप्त मेरो खल्ती मा केवल एक सिक्का संग रिच - बस मुख्य कुरा हो - एक मालिक बन्ने rarest र सबै भन्दा हाम्रो प्रस्तावित सूचीमा महंगा।
1933 "डबल ईगल" मा अमेरिकी सिक्का। यो साइन शुद्ध सुन, $ 20 को यसको अंकित मूल्य बनेको छ। तर, यो सिक्का 7.9 मिलियन डलर को लागि खरिद। के यो उदाहरण मा यति मूल्यवान छ? संयुक्त राज्य अमेरिका मा 30 सेकेन्ड सुनको गरे सिक्का जारी भएनन् भन्ने तथ्यलाई गर्न, सबै "डबल चीलले" को प्रगालक गर्न राख्नु थिए कारण र यो छ। तर केही चमत्कार गरेर, 10 सिक्का वित्त मंत्रालय ले चोरी थिए।9माथि संकेत एक अव्यावहारिक रकम लागि लन्डन बिक्रि विशेष सेवाहरूको प्रतिहरू, र एक पत्ता लगाउन व्यवस्थित।
स्तर मा दोस्रो स्थानमा "बगिरहेको बाल" सिक्का छ। डलर नोट 1794 मा चाँदीको गरे। यो श्रृंखला संग्रहकर्ता सबैभन्दा दुर्लभ र बहुमूल्य, र यसैले सिक्का को मूल्य पछिल्लो थियो 7.85 लाख डलर धेरै बेचिएको द्वारा मान्यता प्राप्त छ। अन्य स्रोतबाट अनुसार, यो सिक्का 10 लाख डलर लागि बेचिएको थियो।
खैर, र "सबैभन्दा बहुमूल्य सुन सिक्का" को सूचीमा एक कांस्य पदक 1343 मा नोट समेट्छ। यसको मूल्य दर्जा दिइएको6Shillings भन्दा बढी छैन, तर लिलामी मा यो 6.8 मिलियन डलर को लागि बेचिएको थियो। यो सिक्का "एडवर्ड III» (वा "डबल चितुवा") शुद्ध सुन बनेको र संसारमा सबैभन्दा पुरानो एक छ।
पोर्चुगल बहुमूल्य सिक्का
पोर्चुगिज प्राचीन सिक्का एकदम numismatists मा मूल्यवान, तर सबै छैन। मिति भन्दा महंगा को एक खडा एक चाँदी सिक्का 1000 Escudos 1999, धेरै राम्रो अवस्था VF छ जसको लागि। यो नोट समयमा (abrasions को अभाव मा, र यो स्पष्ट देखिने आंकडा छ भने) $ 20 को मूल्य प्रस्ताव गर्न सक्नुहुन्छ।
कुनै कम मूल्य 50 Centavos को संप्रदाय मा 1913 मा पोर्चुगिज पुरातन सिक्का छन्। चांदी लागि नोट संग्रहकर्ता apiece बारेमा 1,400 rubles भुक्तानी गर्न इच्छुक छन्। सिक्का वजन 12 ग्राम भन्दा बढी। यो XF श्रेणी बुझाउँछ। numismatist आफैलाई संग्रह मा एक समान सिक्का प्राप्त गर्न सक्छन् भने - यो खुसी हुन असम्भव छ। सामान्यतया, तिनीहरूले बलौटे soils मा उत्खनन समयमा archaeologists छन्। अक्सर लिलामी यी वस्तुहरूको लागत कल्पना सबै रेकर्ड तोडेर।
सबैभन्दा लोकप्रिय आज एक यस्तो पुरातन सिक्का (पोर्चुगिज)5Escudos 1990 र 1935 मा एक चाँदी रुपैयाँ रूपमा छन्। परिसंचरण थियो जो पहिलो सिक्का लागि बारेमा भुक्तानी गर्न इच्छुक सिक्का संग्रहकर्ता , $ 100 श्रेणी (चतुर्थ, एफ) को बाबजुद। सानो रकममा चाँदी रुपैयाँ लागत संग्रहकर्ता - 50 $।
खैर, सायद, मूल्याङ्कन "सबै भन्दा महंगा प्राचीन सिक्का पोर्चुगिज" 6400 उडानहरू ऐन सबैभन्दा मूल्यवान धेरै। पैसा साइन शुद्ध सुनको गरे, यसको वजन 14.34 ग्राम पुग्छ। सिक्का सही हालत मा सिक्का लागि Joan6चित्रण गरिएको (श्रेणी द्वितीय +) numismatists 95-96 हजार rubles बराबर रकम प्रस्ताव।
बहुमूल्य सोभियत सिक्का
को XX सताब्दी मा सोभियत संघ मा coinage स्थापित गरिएको छैन, त्यसैले धेरै बैंकनोट्स ठूलो मूल्य को संग्रहकर्ता लागि हो। साथै, कारण राजनीतिक प्रणाली को अस्थिरता र सीमित परिमाणमा, यदि जारी मौद्रिक एकाइहरु गर्न। मात्र दुर्लभ उदाहरणहरू बाँचे छ, हरेक numismatist को कि सपना प्राप्त।
मिति गर्न, सोभियत संघ को सबैभन्दा महंगा प्राचीन सिक्का 50 1934 मा, 1929 मा सेन्ट को fledgling छाप मा जारी, र 20 सेन्ट छन्। डाटा अनुसार, पचास डलर यसको मूल्य छैन 10 लाख भन्दा कम rubles छ त केवल एक निजी संग्रह मा संरक्षित छ। को लिलामी मा 20 सेन्ट को संप्रदाय मा बैंकनोट्स 100 हजार rubles को लागि खरिद गर्न सकिन्छ। यो सिक्का को मूल्य तिनीहरूले मात्र 15 प्रतिहरू कुटिया मा स्थित छ, एक को बाँकी भन्ने तथ्यलाई कारण छ।
Cruzado मुद्रा सराहना वा छैन?
आज, धेरै सट्टेबाजों ब्राजिलमा डलरमा कि मुद्दा कागज पैसा मा कमाउन। अमेरिकी बिल धेरै समान देखिन्छ जो मुद्रा, - "डबल" को भूमिका मा Cruzado गर्दछ। साथै, अक्सर यी बिल साईट संग्रहकर्ता बेच्न प्रयास गर्दै हुनुहुन्छ। Cruzado साँचो लागत भन्दा बढी र 50 rubles छैन।
पुरानो सिक्का को मूल्य कसरी निर्धारण गर्ने?
प्राचीन सिक्का प्रत्येक होल्डर आफ्नो निष्कर्ष साँचो मूल्य थाहा गर्न चाहन्छ। त्यहाँ धेरै तरिकाहरू छन्:
इन्टरनेटमा हेर्न। यो मान्छे आउन unanswerable प्रश्न सामना छन् जो को नेटवर्क छ। तर, हाम्रो मामला मा, यो विधि छैन सही छ। दुर्भाग्यवश, सट्टेबाजों numismatics मा नजान्ने मान्छे मा नगद गर्न चाहने द्वारा राखिएको यो लेख र विज्ञापन को सबै भन्दा।
numismatics गर्न पुस्तिका प्रयोग गर्नुहोस्। यो विधि उपयुक्त छ, सबै भन्दा संभावना छ, को सोभियत संघ, रूसी संघ र RSFSR को सिक्का मात्र धारकों। खुला विदेशी सिक्का मा पुस्तकहरू जस्तै उपलब्ध पाउन, र यो व्यावहारिक असम्भव छ।
को लिलामी मा जानकारी हेर्नुहोस्। अभ्यास शो यस्ता साइटहरु भन्दा सान्दर्भिक जानकारी पोस्ट। लागत मा त्रुटि 10% भन्दा बढी छैन। मूल्य पनि 4-5 लिलामी तुलना र अर्थ आउन गर्नुपर्छ।
पछि सबै भन्दा महंगी उदाहरणहरू लामो निजी संग्रह मा dispersed गरिएको छ रूपमा, साँच्चै बहुमूल्य सिक्का आज व्यावहारिक असम्भव छ पत्ता लगाउन, त्यो इन्टरनेटमा देखे के को शब्द विश्वास छैन: अन्तमा हामी फेरि सम्झन।
सिक्का रूस र संसारको संग्रहकर्ता
विश्व मुद्रा: सिक्का भारत
सिक्का श्रेणीका। सिक्का एक मूल्यांकन कहाँ बनाउने? तालिका रूसी सिक्का आकलन छ। सिक्का को राज्य को आकलन
क्रिसमस कहाँ गरे?
योजना दृश्यहरु र सिफारिसहरू: को पुतली लागि crochet पोशाक
होटल हम्मामेट रेगेसी होटल4* (टुनिस, हम्मामेट): वर्णन, कोठा र समीक्षा
योजनाबद्ध रेखाचित्र र poncho: spokes यो एक तस्वीर बुनना
रबर expander - एक व्यावहारिक तकिया सिम्युलेटर
"Modelform": समीक्षा र प्रयोगको लागि निर्देशन